Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Amazwe angama-33 abhengeza ukuvalwa kokuhamba okutsha kunye nezithintelo
IBhodi yezoKhenketho yaseAfrika • Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Icandelo lokungenisa izihambi • Amalungelo abantu • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel
Esanda kufunyanwa Micron Uxinzelelo lwe-coronavirus inyanzelise amazwe amaninzi ukuba avale ngokukhawuleza imida yawo kwabanye okanye bonke abafikayo bangaphandle.
Ngelinge lokuthintela ukusasazeka kwe-COVID-19 Micron Ukwahluka kwimimandla yabo, amazwe angama-33 kwihlabathi liphela abhengeze ukuvalwa okuthe ngqo kokuhamba okanye ukomeleza izithintelo zokuhamba kwiidigri ezahlukeneyo ngoku.
Iqondo lobunzima bolawulo lomda liyahluka kwilizwe ukuya kwelinye, kunye neTshayina, Sirayeli , Morocco kunye Japhan ukuvala imida yabo ngokupheleleyo, ngelixa amanye amazwe eqinisa kuphela iiprothokholi zovavanyo lwe-COVID-19 emdeni.
Gqibezela iZithintelo zokuNgena kwamanye amazwe
IChina - I-China sele inolawulo olungqongqo lwemida, ngabemi kuphela kunye nabanini beemvume zokuhlala abavunyelweyo ukungena elizweni.
Sirayeli - U-Israyeli wabanqanda abantu basemzini ukuba bangene kweli lizwe kangangeentsuku ezili-14. Abemi bakwa-Israeli baya kukwazi ukubuyela kweli lizwe kodwa baya kudinga ukuvalelwa bodwa, nokuba bagonywe ngokupheleleyo.
Japhan - IJapan ivale imida yayo kubantu abangengobemi kwinyanga enye, oku kubandakanya abafundi abatshintshiselana namazwe angaphandle kunye nabo bahambela ishishini.
Morokho - I-Morocco irhoxise zonke iinqwelomoya ezingenayo iiveki ezimbini.